Eo an-dàlana hatrany ny GUODA Inc
Mba hanatsarana ny fahaizanay manavao, ny GUODA dia handray anjara amin'ny fampirantiana miovaova na an-trano na an-tsambo. Ny tanjona voalohany amin'ny GUODA Inc. dia mandeha manerantany. Araka izany, navitrika tamin'ny fandraisana anjara amin'ny foara manerantany isika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Manantena fa ho hita ny bisikiletanay tsara, amin'ny sam ...
Fanomanana ny Canton Fair
Ny herinandro lasa teo dia nanomana ny antsipirian'ny The Export Fair an-tserasera i Guoda Tianjin Inc., ny departemanta momba ny varotra. Nandeha ny orinasanay haka horonantsary fampidirana ireo vokatra. naka se ...
China Canton Fair: fampirantiana bisikileta GUODA
Ny herinandro lasa teo dia nanomana ny antsipirian'ny The Export Fair an-tserasera i Guoda Tianjin Inc., ny departemanta momba ny varotra. Nandeha ny orinasanay haka horonantsary fampidirana ireo vokatra. izany koa ...
Mikaroha eny an-dàlana hatrany ny tsena sy ny fanavaozana GUODA Inc
Mba hanatsarana ny fahaizanay manavao, ny GUODA dia handray anjara amin'ny fampirantiana miovaova na an-trano na an-tsambo. Ny tanjona voalohany amin'ny GUODA Inc. dia mandeha manerantany. Araka izany, navitrika tamin'ny fandraisana anjara amin'ny foara manerantany isika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Manantena fa ny bisikiletanay tsara dia mety ho ...
Mandray andraikitra amin'ny fangatahan'ny vokatra mpanjifa ny GUODA
Vao tsy ela akory izay, ny bisikiletan'ny ankizy GUODA dia mivarotra mafana any atsimo atsinanan'i Azia. Mpanjifa maro no misafidy karazana vokatra marobe, toy ny bisikileta fandanjalanjan'ny ankizy, bisikileta an-tendrombohitra ary bisikileta misy ankizy misy kodiarana fiofanana, indrindra ny bisikiletan'ny ankizy. Mpanjifa marobe, aleon'izy ireo misafidy ...
Tongasoa eto GUODA
Tongasoa eto amin'ny orinasam-pampandrosoana siantifika sy haitao GUODA (Tianjin)! Hatramin'ny 2007, manolo-tena hanokatra orinasa matihanina amin'ny famokarana bisikileta elektrika izahay. Tamin'ny 2014, natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny GUODA ary miorina ao Tianjin, izay lehibe indrindra ...
Vaovao Tsara —— Amidy ny faritra bisikileta
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-17
Manokatra tranonkala izahay mba hampisehoana ny orinasanay ary hitondranay ny vokatray, bisikileta, bisikileta ary bisikileta elektrika, moto elektrika sy scooter, bisikileta ankizy ary kojakojan-jaza. Amin'ny taona 2020, miroborobo ny tsenan'ny bisikileta. Araka ny filan'ny tsena dia nanomboka nivarotra fitaovana koa izahay. Manome namboarina ...
Asehoy anao ny manodidina ny vokatra -— bisikileta
avy amin'ny admin tamin'ny 20-08-06
Amin'ny maha orinasa hamokatra e-bisikileta dia tena zava-dehibe ny fananana fifehezana kalitao. Voalohany, ireo mpiasanay dia manamarina ireo vatan'ny bisikileta alefa. Avy eo avelao ny fefy bisikileta elektrika voalamina tsara mifatotra mafy amin'ny fototra azo soloina amin'ny toeram-piasana miaraka amin'ny diloilo apetaka aminy. ...